(FAALLO): Moshinka Xildhibaanadda u ekaa Saf-mar lagu sidkayo Halxiraale Siyaasadeed – Radio Dalsan FM 91.5 MHz | Warar Sugan | Somalia News
(FAALLO): Moshinka Xildhibaanadda u ekaa Saf-mar lagu sidkayo Halxiraale Siyaasadeed
Xildhibaano ay madax marayso Mooshin-jecel, Madaxweyne eedeymo kulul loo jeedinayo iyo Bulsho jahwareer nololeed iyo sicir barar la anfariirsan ayaa waxay noqdeen Mashaqo aan la haynin Toobiyihii lagu maarayn lahaa.
Waa Halxiraale Siyaasadeed oo u baahan in Khibrad iyo Mas’uuliyad lagu kala furdaamiyo, inkastoo aan la ogeyn Hadafka Dhabta ee xilligan laga leeyahay Mooshinkaasi, ma dan shaqsiyadeed?, mid beeleed ?, mid siyaasadeed ? ama mid Qas-siyaasadeed?
Loolan Adag oo Sharciga in lagu kala baxo ayana la hadal-hayaa inay tahay Wadiiqadda ugu caqligalsan ee lagu xalin karo Moosihinka ay Xildhibaanadda ololkiisa shidayan.
Waana hubaal inay muddo toddobaadyo ama bilo qaadan karto sidii ay Mudanayaasha Barlamaanka u xukmin lahaayeen Garnaqsiga arrintaasi.
Xildhibaanadda soo bandhigay Moshinka ayaa waxay ku soo faruurmi karta Xaallado Siyaasadeed iyo Sharci, haddii ay taageero ka waayaan 182-ka Xildhibaan ee Mooshinka diidan ama dhedhexaadka ah.
Xeeldheerayaasha ayaa rumeysan inay Xildhibaanadda Barlamaanka taageeri doonin Codka Mooshinkaasi, sababo badan oo macquul ah darted.
Danjirayaaha Beesha Calaamka waxay iyagana codkooda ku biiriyeen in lala yimaado Caqli Siyaasadeed, lana badbaadiyo Horumarka Siyaasadeed, Nabadeed iyo Bulsho ee la gaaray iyo Hiigsiga Himiladda Qaranka.
Xildhibaanadda u ololeynayo Mooshinka ayaa u muuqda kuwo ku mintidayo Kiiskaasi, isla markaana ka biyo diidsan in Xal-siyaasadeed lagu dhameeyo Buuqa Taagan, mana muuqato Rajo ay ugu tanaasulayaan Danaha Qaranka.
Xeeldheerayaasha waxa saadaalinayaan Haddii ay Xildhibaanaddaasi la degto Leexadda Mooshinkan, inuu bilaaban karto Loolanka dhinaca Sharciga iyo in ay Madaxtooyadda furaan Gal-dacwadeed ka dhan ah Xildhibaanadda, maadaama ay Xildhibanaadaasi cuskadeen qoddobo Madaxweynaha Qaranka.
Waa xaallad Khatar kale sii abuuri karta, haddii aysan Madaxtooyadda ka tanaasulin inay Xildhibaanadda Mooshinka keenay ku kala baxaan Sharciga Qaranka.
Docda kale, Xildhibaanadda Moshinka soo abaabulay ayaa u muuqda kuwo hamuun u qaba Xilal Xukuumadeed, maadaama badankooda xillka Wasiirnimo laga qaaday iyagoo aan filaynin.
Si kastaba ha ahaatee, Hamiga Xildhibaanadda ayaa loo qaadan karaa Mooshin Saf-mareen ah oo ay ku doonayaan inay ku salfadaan Madaxweynaha iyo Golaha Wasiiradda.
Dhageyso: Warka Subax ee Radio Dalsan 23-08-2015
Boliska Kanada oo uu isku soo dhiibay Eedeysane Somali loo baadi-goobayey dilka Marxuum Somali ahaa